Ihe ndi ahia choro ima banyere HTML5 | Martech Zone
HTML5 nwere ọtụtụ nkwa maka ime ọdịnaya dị na ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịntanetị… ma ọ bụrụ na folks ga-emelite ihe nchọgharị ha na nsụgharị ndị ọhụrụ. Ajụjụ a bụ ma oge eruola ka nzukọ gị malite ịmalitezigharị saịtị gị na HTML5 na ogologo oge ọ ga-ewe iji nwetaghachi ego iji mee nke a. Uberflip agbakọtala ụfọdụ stats dị mkpa na HMTL5 iji nyere ndị ahịa aka ịme mkpebi ahụ.
HTML5 na-enye ndị ahịa ikike ịnapụta ọdịnaya na ọtụtụ nyiwe (desktọọpụ, mbadamba, smartphone) na ọnụ ala dị ala karị.
Dịka teknụzụ dabeere na ihe nchọgharị, HTML5 ngwa weebụ nwere ike wulite otu oge ma na-agba ọsọ na ihe ọ bụla ngwaọrụ; ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ihe nchọgharị na-akwado asụsụ mmemme a.
Ngwa HTML5 na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogo ogo mmekọrịta na omume dịka ngwa ọdịnala
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5% nke ndị mmepe na-eji HTML50, a na-eme atụmatụ itolita na 80% n'ime afọ 3 sochirinụ